Taangiyo ay horay u qabsadeen TPLF oo qaar la burburiyey & meel ay ku shirayeen madaxdoodu oo la duqeeyey + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Taangiyo ay horay u qabsadeen TPLF oo qaar la burburiyey & meel...
Taangiyo ay horay u qabsadeen TPLF oo qaar la burburiyey & meel ay ku shirayeen madaxdoodu oo la duqeeyey + Sawirro
(Hadalsame) 16 Nof 2020 – Warbaahinta Itoobiya, gaar ahaana Telefishinka ku hadla afka dawladda ee EBC, ayaa baahiyey sawirro ay ku sheegeen in ay yihiin ”’hubkii ay xoogaga TPLF ka qaateen” Taliskii ciidamada millateriga, gaar ahaan Qaybta Waqooyi ee Shiraaro.
Waxay intaa raaciyeen in hubka la qaatay oo ay ku jireen taangiyada culculus ay qaarkood jidadka ay ku burburiyeen ciidanka millteriga DF Itoobiya.
Taangiyada iyo gawaarida kale ee gaashaaman, ayaa qaar sidaa lagu burburiyey si aysan u adeegsan malliishiyaadka TPLF, halka qaar kale iyaga oo bed qaba dib looga qabsaday, sida ay sheegayso warbaahinta maxalliga ah ee Addis Ababa.
Warar kale oo cusub ayaa sheegaya in madaafiic iyo duqeymo ay iminka ka socdaan magaalada Makele, oo ah xaruntii dhexe ee maamul-goboleedka Tigreega, iyadoo fadhiga maamulkaasi ee magaaladaa ku yaalla 4 gantaal lagu dhuftay.
Wararku waxaa kale oo ay sheegayaan in dhismaha Jaamacadda Makele University meel aad ugu dhow oo ay ku shirayeen qaar ka mid ah madaxda Tigreega la garaacay, balse weli ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin kara waxa halkaa ka dhacay oo sugan.
Previous articleNibiriyaal doonyaha geddinaya oo laga mari la’yahay Badda Atlaantigga (Daawo)
Next articleLaacib ka tirsan Lazio oo kashifay sirta ka dambaysa dayuurad kooxdaa loo keenay oo la ganaaxayo